e.l.f.Studio Body Glow | အွန်လိုင်း SHOP.COM.MM တွင် ၀ယ်ယူမည်
အလိုရှိရာ အမျိုးအစား ကုန်နေပါက ပြန်ရနိုင်မည့် အချိန်တွင် သိရှိနိုင်ရန်
ကုန်နေပါသည် ပြန်ရနိုင်မည့်အခါ အကြောင်းကြားပေးပါ
ရောင်းချသူ Beauty & Beyond
2015 ဒီဇငျဘာ 24
သုံးလို့အရမ်းကောင်းပါတယ်။ သုံထားပြီးတာနဲ့ တနေကုန်အနံ့သင်းနေစေတယ်။ အသားအရေကိုလဲ ၀င်းနေစေတယ်။ နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
E.L.F. သည် အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်သည့်အလှကုန်ပစ္စည်းများကို သင်သဘောကျစေမည့်ဈေးနှုန်းများဖြင့် ဂုဏ်ယူစွာပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ E.L.F. အလှကုန်များတွင် သဘာဝတွင်းထွက်ပစ္စည်းများကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး သင့်အသားအရေပေါ်မှာ ကြာရှည်စွာစိုပြည်တောက်ပနေစေရန်ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ ကွန်ဆီလာ၊ နှုတ်ခမ်းလိုင်နာ၊ မျက်လုံးလိုင်နာ၊ နှုတ်ခမ်းနီ၊ မျက်တောင်ကော့ဆေး၊ အလှပြင်ကိရိယာများ စသည့် ဈေးနှုန်းသင့်တင့်လှသော အမျိုးအစားများစွာထဲမှ သင့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
သင့်မျက်ဝန်းများသာ ပြတင်းပေါက်လေးများဖြစ်သည်ဆိုပါက E.L.F. မှ သင့်မျက်ဝန်းခြယ်သရန် လိုအပ်ချက်အားလုံးအတွက် တံခါးဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ။ ဆန်းသစ်လှပထူးခြားသည့်အရောင်များဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော E.L.F. မျက်လုံးခြယ်ပစ္စည်းများက သင်နှစ်သက်မည့်နှုန်းထားဖြင့် ခံစားမှုတိုင်းကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိဖော်ညွှန်းနိုင်မည့် မျက်ဝန်း၁စုံအား ပေးစွမ်းဖို့အတွက်အာမခံနိုင်ပါသည်။
ဟန်ဆောင်ချီးမွမ်းစကားများ သင့်အတွက်မလိုအပ်တော့ပါ။ အံ့မခန်းလှပသည့်နှုတ်ခမ်း၁စုံသာလိုအပ်ပါသည်။ E.L.F. က သင့်နှုတ်ခမ်းလေးများနေ့တိုင်းလှပနေစေရန် လိုအပ်သည့်နှုတ်ခမ်းခြယ်ပစ္စည်းအားလုံး ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ သဘာဝပန်းနုရောင်မှစ၍ ညှို့ချက်ပြင်းအရောင်များအထိ စိတ်ကြိုက်ပြောင်းနိုင်သည်သာမက သင့်ရုပ်သွင်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန် အရောင်များကိုလည်း ပေါင်းစပ်ဖန်တီးခြယ်သနိုင်ပါသည်။
ဖက်ရှင်လျှောက်လမ်းမှနေ့စဉ်ဘဝအထိ သင့်မျက်နှာအတွက် E.L.F. မှ ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အသင့်ပင်။ သင့်အား နေ့စဉ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရလဒ်များပိုင်ဆိုင်နိုင်စေရန် E.L.F. က မျက်နှာခြယ်ပစ္စည်းများ၊ အလှပြင်ကိရိယာများနှင့် အကြံဥာဏ်များပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ ဝင်းလက်လှပသည့်မျက်နှာလေးဖြစ်စေရန် သင်လိုအပ်သမျှအားလုံးကို သက်သာသောဈေးနှုန်းများဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါပြီ။
ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက် Studio Body Glow